Tattoo Wolf: macnaha iyo astaamaha | Tattoo
El tattoo yeey Waa wax qof kastaaba ku jecel quruxdiisa iyo geesinimadiisa. Dad badan yeeydu waxay leedahay astaan ​​weyn oo ay ugu mahadcelineyso taariikhdeeda iyo macnaheeda. Dhaqamada qaar, yeeydu waa ugaarsadeyaasha habeenkii, ugaarsato khabiir ah sida qaarna xayawaan u yihiin kuwa kale ayaa uga baqa. Dhaqamada kale, yeeydu waa dagaalyahanno, hoggaamiyeyaal waaweyn iyo ilaaliyaal aan waxba galabsan.
Waxay leeyihiin sumcad aad u kala duwan waxayna u muuqataa in yeeydu ay tahay xayawaan gaar ah oo had iyo jeer fariisan doona boos qalbiyadeenna maadaama uu yahay mid ka mid ah awoowayaasha asxaabta dadka ugu fiican: eeyga.. Yeey waligood waxaa loo arkay inay yihiin dagaalyahano arxan daran cabsi la’aan, sida ugaarsadayaasha dabiiciga ah waana in dadku ka baqaan inuu u arko inay bahal yihiin.
1 Tattoo yey wuxuu matalaa sharaftiisa
2 Tattoo Wolf macnaha
3 Yey afkeena
4 Noocyada tattoos yey
4.5 Soo noqo
5 Tattoo yey ugu fiican
Tattoo yey wuxuu matalaa sharaftiisa
Yeygu wuxuu soo maray macnayaal badan iyadoo kuxiran waqtiga iyo dhaqanka, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay had iyo jeer tahay oo ay waligeed noqon doonto xayawaan layaableh oo mudan in lajeclaado oo dabcan la ixtiraamo.
In badan oo ka mid ah qabiilooyinka Mareykanka iyo Mexico, yeeyda waxaa loo arkaa inay yihiin awood iyo xoog, laakiin sidoo kale waa tiir weyn oo xigmad iyo hage ruuxiyan ah. Iyagu waa Mareykan Dhalad ah, yeeydu aad ayey uga badan tahay xayawaanka duurjoogta ah waxaana loo tixgeliyaa inay tahay wadarta nolosha mustaqbalka maxaa yeelay waxay ka caawisaa fahamka dhimashada iyo waaya-aragnimada dabeecaddeeda ugaarsiga ah.
Marka yeey la jahawareerto dhediga, weligood way la joogaan. Iyagu waa waalid jecel carruurtooda mar walbana way ilaalin doonaan iyada oo aan loo eegin duruufaha jira. Waxaa kaloo loo yaqaan inay yihiin xayawaan daacad ah oo hadal badan.
Sawirka yeydu ku oyneyso dayaxa ayaa astaan ​​u ah awooda uu u leeyahay inuu muujiyo maamulkiisa gobolka ama inuu u yeero xubnaha xirmada si ay ula kulmaan. Waa sawir aad u fiican oo loogu talagalay tattoo iyo wixii ka sarreeya, lagu raray astaamo iyo macno qofka go'aansaday inuu sameeyo sawirkaas yey.
Qayladu ma aha aaladda kaliya ee yeeydu ay tahay inay kula xiriiraan asxaabtooda, waxay sidoo kale adeegsataa luuqada jirka si ay ugu gudbiso dareeno badan oo kala duwan sida: cabsi, dagaal, naxariis iyo xitaa kalgacal xubnaha xubnaheeda. Sababtoo ah yeey akhristaha qaaliga ahWaxay kaloo leedahay dareen maadaama ay tahay noole shakhsiyaddiisa u gaarka ah leh.
Yeygu wuxuu adeegsadaa dareenka urta, maqalka iyo aragga si uu u muujiyo shucuur kala duwan oo kala duwan si uu ula xiriiro. Noocyada noocan ah wuxuu ku soo bandhigi karaa dabeecadaha bulsheed ee laga bartay waalidkiis iyo xubnaha kale ee xirmada.
Tattoo Wolf macnaha
El Tattoo yey wuxuu tilmaami karaa macnaha soo socda:
Way cadahay in macnayaasha ay ku kala duwanaan doonaan hadba qofka iyo waaya aragnimadiisa noloshiisa, maxaa yeelay mid waliba wuxuu u turjumi karaa astaamaha yeyda siyaabo kala duwan. Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay yeey maxaa yeelay waxaad nasiib u yeelatay inaad qaar la kulanto oo aad fahanto sida ay yihiin iyo sharafnimada lagu garto haddii laguula dhaqmo si xushmad iyo kalgacal leh dhalashadooda. Ama waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay maxaa yeelay waxay astaan ​​u tahay wax muhiim u ah adiga iyo qoyskaaga.
Intaas waxaa sii dheer, yeeydu sidoo kale waa astaan ​​nasiib iyo bacrimin, macno aad muhiim ugu ah dad badan. Dhaqankii Mongolia waxay aaminsan yihiin inay yihiin farac ka mid ah yeyda waana sababta ay ugu arkaan xayawaan muqadas ah. Dad badan ayaa u haysta yeeyda inuu yahay noole soo jiita nasiib wacan iyo barwaaqo.
Jabbaan sidoo kale waxay u maleynayaan in yeeydu tahay noole awood leh oo dadka ka ilaaliya cudurrada ama nasiib darrooyinka qaarkood. Maxaa intaa ka badan, Jabaan gudaheeda sidoo kale waxay u maleynayaan in yeeygu ka caawiyo lamaanayaasha ma dhalayska ah inay dhalaan.
Dhaqanka Chechenka, yeydu waxay ka badan tahay xayawaanka duurjoogta ah, waxay astaan ​​u tahay hanka qaran. Waxay aaminsan yihiin in hooyada yeydu tahay astaanta ugu badan ee xoogga iyo ilaalinta ee dadka ka caawisa inay dareemaan ilaalin.
Xilligan yeeydu waa xayawaan duurjoog ah oo aan la dhacsan nahay oo aan runtii jecel nahay oo soo jiidanno vibes wanaagsan, dad badan ayaa a tattoo yeey waxaa laga yaabaa si fudud sababtoo ah quruxdeeda iyo si loo gudbiyo xoog iyo awood.
Laakiin iyada oo aan la ogaan, yeeydu xitaa waxay ku jirtaa luuqadeena hadda tan iyo markii aan saameyn ku yeelanay joogitaankeeda. Waxaa laga yaabaa inaad waligaa wax uun dhahday: 'Aad baan u gaajooday waxaan cuni lahaa lo'. Sida iska cad ma cuni doontid lo ', laakiin waa hab kor loogu qaadayo wacyiga sida aad u gaajeysan tahay. Tibaaxaha kale ee ku lug leh saamaynta yey ee dhaqankeenna waa:
Yey cidla ah. Yey keligiis ah waxaa loola jeedaa qof doorbidaya inuu kaligiis ahaado oo uu helo jidkiisa, kana fog jahwareerka ay dadka badani ku dareensiinayaan.
Yey leh maqaarka idaha. Waxay loola jeedaa dadka umuuqda inay yihiin dad wanaagsan oo xitaa astaamo qumman oo runti noqon kara dad cabsi badan.
Shakhsiyadda Wolf. Markay kuu sheegaan inaad leedahay dabeecad yey, shaki la’aan waxay kugu siinayaan amaan, kaliya waa inaad aqrisaa macnaha si aad u ogaato waxay sheegayaan.
También existen Tattoo yeey qabyaalad taas oo kuxiran mawduucyada la taaban karo iyo adduunyo aad uxun. Dhinaca kale, haddii aad go'aansato inaad hesho yeeyda dhakada la sawiray, waxaa habboon in la yiraahdo waxay u taagan tahay tamar mugdi ah. Hadaad ku sawirato yeyda indhaha ku haysa waxaad muujineysaa iska caabintaada iyo geesinimadaada wajiga nolosha iyo hadaad ku xaragooto kulul oo qeyla, markaa waxaad muujineysaa dhammaan geesinimadaada, difaacaaga iyo dareenkaaga ilaalinta.
Tani waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inaad qiimeyso kiiska aad rabto samee yeey tattoo jirkaaga, laakiin xusuusnow in waxa dhabta ah ee muhiimka ahi ay yihiin waxa adiga adiga kuu macno ah, iyadoon loo eegin macnaha ay u leedahay dadka kale ama dhaqamada kale.
Noocyada tattoos yey
Sida naqshadaha badankood, tattoos Yeyda looma daayo gadaal. Waxay leeyihiin astaamo guud oo guud taasna waa inaad ugu raaxeysan kartaa siyaabo kala duwan adigoon wax ka beddelin macnahooda ama shaashaddooda lafteeda.
In Tattoo yeey qabyaalad, waxaan arki doonaa sida khad madow u noqon doono jilaa-weynaha. Intaa waxaa sii dheer, sawirka 'xayawaanka' ayaa la samayn doonaa iyada oo loo mahadcelinayo khadadkaas sifo gaar ah u leh ifafaalahaas. Hab gaar ah oo aad u asal ah oo nolosha lagu siiyo tattoo-gaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxay xambaarsan tahay fikradaha waaweyn ee soojireenka ah ee laga ilaaliyay qabiilooyinkii hore.
Taabashada ugu yar ayaa diiradda saareysa qaabkan. The Tattoo yey joomatari Waxay ka koobnaan doonaan khadad, iyo sidoo kale goobo ama saddexagal. Laakiin rumayso ama ha rumaysan, dhammaantood wada noolaansho buuxa, waxay ku guuleystaan ​​natiijo fantastik ah, fudud oo aad u casri ah. Waxaa la sheegaa in astaamahan noocyadooda ah si aad ah loo qiimeeyay ilaa Renaissance, inkasta oo ay u muuqato in maanta, ay wali yihiin.
ka Tattoo yey oo gacanta ku jirta waa mid soo noqnoqota oo ay qurxiyaan qaybta kore ee ka mid ah. In kasta oo haddii aad rabto inaad ku darto wax yar oo asal ah, waxaad had iyo jeer iska sawiri kartaa dhabarka gacantaada, oo ku dhow xusulka.
Haddii aad jeceshahay isku-darka midabka, markaa waad jeclaan doontaa Tattoo yey biyo-biyo. Khadka madow ayaa loo weeciyay hal dhinac maxaa yeelay qaraxa nalka wuxuu noqon doonaa aktarka weyn. Midabada ugu wanaagsan waxay isugu yimaadaan qaab muuqaal ah laakiin aan la ilaawin in yeeydu sidoo kale tahay sawirka ugu habboon.
Hadaad rabto inaad xirato a Tattoo yey dhabarka, markaa waxay noqon doontaa meel wanaagsan oo loo aado naqshadaha waaweyn. Waxaad had iyo jeer isku dari kartaa wejiga xayawaanka dayaxa ama cabaadkiisa, oo sidoo kale baahi weyn loogu qabay qaab nuucaan ah.
ka yeey baroorta waa daciifnimo weyn. Hore ayaan u soo sheegnay laakiin shaki la’aan, iyaguna waa halyeeyo waaweyn. Haddii yeeydu ka dhex ciyeyso dayaxa, waxay astaan ​​u noqon doontaa dheddignimada. Laakiin isla markaa waa awood, ilaalin ama xigmad.
Waqtigan xaadirka ah waxaan wada aragnay taxanaha "Twilight". Waa hagaag, dabeecadda Yacquub madow waxay leedahay faa iidada isu rogida yey. Laakiin qaabkiisa aadanaha, wuxuu ku leeyahay tattoo gacantiisa. Naqshadeynta qaab qabiileedka oo lagu kala duwanaan karo sida ku jirta, waxay muujineysaa madaxa yeeyga. Xaqiiqdii waad horay u ogaatay!
Tattoo yey ugu fiican
In kasta oo ay badan yihiin oo ay kala duwan yihiin, had iyo jeer waxa jira qaar in yar ka sii muuqda. Sidaa darteed haddii aad raadineyso fikrado iyo dhiirigelin, halkan waxaan uga tageynaa qaab muuqaal ah. Tattoo yey ugu fiican waxay ku jiraan farahaaga! Waa maxay waxa aad ugu jeceshahay?
Wolf iyo mandala tattoo, rafcaan u leh dhinacaaga duurjoogta ah iyo dareenka
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo yeroo
Waad salaaman tahay, sida uu boggaagu u weyn yahay, aad baad ugu mahadsan tahay naqshadaha iyo macluumaadka
Runtu waxay tahay in waxyaalahan aad ii soo jiitaan oo mararka qaarkood runtii aan doonayo inaan noqdo yeey
Aad u qurux badan boggaaga waxaan ka helay wax badan um gram salu
Ku jawaab Sônia maria
Waxaan u arkaa sharaxaadaada mid gaar ah marka loo eego naqshadaha iyo macnahooda aad muhiim u tahay, maadaama habkan loogu talagalay taageerayaasha tattoo ay nooga fududaan tahay inaan ogaanno micnaha taatikada aan ku dul saareyno maqaarkayagu ay leedahay. Macluumaadka la aruuriyay waa mid aad u xiiso badan Mahadsanid iyo Duco.
Ku jawaab Deiver Di Salvatori
Aad baad u mahadsantahay, Arturo!. Tattoo qurux badan! 🙂
Tattoo-ka oo leh dambaska kuwa aad jeceshahay ayaa durba run ah
Xilli ciyaareedkii labaad ee 'Tattoo a dos' ayaa yimid MTV Spain